Kaniisadaha Soul oo dhan waxay qaataa dadka ugu horeeya ee magan gelya doonka ah. - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > In News > Dhammaan Kaniisadaha Naftu waxay qaataan dadka ugu horreeya ee magan gelya doonka ah.
Dhammaan Kaniisadaha Naftu waxay qaataan dadka ugu horreeya ee magan gelya doonka ah.
Kaniisadaha Soul oo dhan waxay qaataa dadka ugu horeeya ee magan gelya doonka ah
Sanctuary oo ficil ah
By Nat Stein @xDayaannax
SIsagoo dul jiifa dabaqyada adag ee kaniisadda oo leh qaylo, 3-sano jir David ah ayaan ku qanacsanayn culeyska xaaladdiisa nololeed ee cusub ee ka jirta All All Souls Unitarian Universalist Church ee ku taal bartamaha magaalada Colorado Springs. Wuxuu helaa dhammaan cabitaanka tufaaxa uu rabo markastana waxaa kujira buskudyo - riyada socod baradka. Laakiin aabihii David, Elmer Peña Peña, 37, joogitaanka kaniisadda mustaqbalka dhow waxay la mid tahay sidii loo ilaalin lahaa qarow.
"Waxay u egtahay in dhammaan albaabada la xiray," ayuu yidhi. "Tani waa ikhtiyaarka kaliya ee aan haysto."
Peña wuxuu lahadlay wargayska Independent iyada oo loo turjumayo dhaqdhaqaaqaha maxalliga ah ee Jerima King subaxnimadii Agoosto 30. Peña wuxuu uun qaatay habeenkiisii ​​ugu horreeyay meelaga quduuska ah, isagoo diidaya amarka masaafurinta halka qareenkiisa uu ka shaqeynayo sidii dib loogu furi lahaa kiiskiisa magangelyo.
Isagu waa kan ugu horreeya ee qaata Dhammaan Nafta dalabkoodii dhowaa ee ahaa in la dejiyo muhaajiriinta u baahan - taatikada ugu dambeysa ee ah in qoysaska la wada ilaaliyo oo ku tiirsan siyaasadda iyo horudhaca in wakiilada Socdaalka iyo Kastamka (ICE) aysan ku qaadin duulaan “meelaha xasaasiga ah,” oo ay ku jiraan meelaha cibaadada, iskuulada iyo isbitaalada. Dhaqdhaqaaqa macbudka ayaa sameeyay soo noolaansho waali ah guud ahaan dalka tan iyo markii la doortay madaxweyne Donald Trump oo mowqifkiisa adag ee socdaalka uu geliyay dhammaan 11 milyan oo qof oo ku nool Ameerika bilaa ogolaansho halista in laga saaro.
Trump wuxuu si joogto ah ugu adkeysanayaa in siyaasadiisa ay kaliya bartilmaameedsato “xurmada xun” - soo galootiga dambiga galay ama ka tirsan burcadda. Laakiin Peña waa caddeyn nool in sheegashooyinkaasi ay yihiin been abuur. Ma aha oo kaliya inuusan laheyn wax dambi ah, laakiin sababta uu u leeyahay inuu halkaan joogo markii ugu horeysay ayaa ah inuu yahay "qof wanaagsan oo wanaagsan" oo ka soo cararay dagaallada burcadda ee haatan dhibaatada ku haya dalkiisa asal ahaan, El Salvador.
Ku soo noqoshada 1980-yadii, dowladda Mareykanka waxay taageertay kalitalisnimada militariga El Salvador ee ka dhanka ahayd jabhadii Marxist. Markii Salvadorans ay ka carareen dagaalkaas sokeeye ee dhiigga badan ku daatay, inbadan waxay ku degeen xaafado dembi-fiiqan uu ka dhacay oo ku taal Los Angeles oo ay ka talin jireen burcad madow iyo reer Mexico ah. Qaxootiga dhalinyarada ah waxay sameysteen burcad MS-13. Markii la tarxiilay tiro badan oo ka tirsan maamulka Clinton dib loogu celiyey El Salvador, halkaas oo dagaalladii sokeeye ay ka tageen awood la'aan, waxay la yimaadeen kooxdoodii iyaga oo tan iyo markaas la legdamayey burcad kale oo Mareykanka ku dhalatay, Barrio 18, si ay u xakameeyaan.
Markii uu koray, Peña wuxuu sheegay inuu iska caabiyey cadaadiska inuu ku biiro hal koox ama mid kale, isagoo ku dadaalaya halkii uu fursad ugu heli lahaa nolol caafimaad leh, oo wax soo saar leh. Taasi waa waxa keenay isaga oo Mareykan ah.
Ka dib isku day galitaan xumo oo 2001 ah, Peña wuxuu ugu dambeyntii u yimid Aurora sanadkaas, halkaas oo ina adeerkiis uu u soo bandhigay meel uu ku sii joogo inta uu shaqo ka helayo inuu bilaabo bixinta kirada u gaarka ah. Si dhakhso leh ayuu u sameeyay, markii ugu horreysay wuxuu soo degay riwaayad ka hor inta uusan dhismaha bilaabin. Peña wuxuu yiri halkaas waa halka lacagta fiican ay ku taal, laakiin shaqaale ahaan bilaa waraaqo, waxaa ku adkaaday qandaraaslayaal guud oo isku dayaya inay ka faa'iidaystaan ​​xoogsatada xoogsada.
"Waxay dareemeysaa in dhammaan albaabada la xiray."
Inkasta oo ay jiraan caqabado, wuxuu sheegay inuu had iyo jeer bixiyo cashuurtiisa oo xitaa uu awoodo inuu xoogaa lacag badbaadiyo. Xaqiiqdii, runti wuxuu bilaabay inuu kobco: Wuxuu qoys lasameeyay haweeneyda uu jecelyahay dhawaana wuxuu iibsaday guri ay kuwada noolaadaan. Labadiisa caruur ee waaweyn ayaa hada sifiican ugu hadla luuqada Ingriiska, taas oo ay ugu mahad celinayaan waxbarashadoodii Dugsiyada Dadweynaha ee Aurora - degmo ku caanbaxday kala duwanaanta qowmiyadeed.
Laakiin waxaas oo dhan waxaa khatar galiyay joogsiga taraafikada: Sannadkii 2012, Peña waxaa loo jiiday xawaare si uu wiilkiisa curadka ah uga soo qaato barnaamijka dugsiga kadib. Tigidhka ka soo baxay taraafikada ayaa keenay in lagu hayo muddo lix bilood ah xarun xabsi oo ay maamusho qandaraasle dawladeed oo ku taal Aurora oo dadka ku haysa xadgudubyada socdaalka. Peña ugu dambeyntii waa la siidaayay markii uu hubiyay joogitaanka ka saarista, taas oo
waa kumeelgaar kumeelgaar ah oo ay heli karaan muhaajiriinta oo muujin kara in masaafurintoodu ay "dhibaato aad u daran" ku keeni karto qoysaskooda iyo bulshada Joogitaanka waxaa loo cusbooneysiiyay si joogto ah sanado - ilaa dhowaan.
In kasta oo aan waxba laga beddelin xaaladdiisa, haddana cusboonaysiintiisii ​​ugu horreysay ee maamulkan cusub si ka duwan ayay u dhacday. Markii uu u galay kormeerkiisa caadiga ah saraakiisha ICE bishii May, waxay ku amreen inuu si iskood ah uga baxo dalka ugu dambeyn Agoosto 16. Peña lama siinin wax fursad ah oo uu racfaan uga qaato go'aanka, ayuu yidhi, kaliya waraaqo fara badan ayaa lagu saxiixayaa. Qunsuliyadda Mareykanka ee El Salvador.
Qareenkiisa, Kimberly Baker Medina, oo howlo gaar ah ku leh Fort Collins, wuxuu Indy u sheegayaa inay tani u dhigantaa koorsadii xilligii Trump. - Waxay la mid tahay uun in ay jirto diidmo buste ah, ayay tidhi. "[Stays] waxaa loo maleynayaa inay tahay mid ku saleysan ikhtiyaari, marka in 'maya' la yiraahdo kiis kasta waxay la micno tahay in (ICE) aysan sharfineynin hadafka daaweyntaas gaarka ah."
Way adag tahay in lala taliyo macaamiisha maalmahan, Madiina waxay tiri, sidaa darteed "markii Elmer uu yimid xafiiskeyga, isagoo ooyaya, aadna uga baqaya inuu dib ugu laabto, waxaan kula taliyay inuu soo wici karo Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado… waxa kaliya ee aan sameyn karo waa inaan isku dayo inaan dib u furo kiiskiisa magangelyo. . ” In kasta oo geeddi-socodka codsigu qaadan karo waqti dheer, haddana waxay ku tirisay Peña inay leedahay dacwad adag oo ay ku sameyso sababo la xiriira inuu cabsi macquul ah ka qabo in lagu silciyo El Salvador. Asylee ahaan, wuxuu dalban karaa deganaansho rasmi ah oo sharci ah sanad kadib.
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado, oo ah hay'ad u doodda, ayaa Peña la xiriiray Isbahaysiga 'Metro Denver Sanctuary Coalition', oo ka caawisay inuu ka helo magangelyo kaniisad ku taal deegaanka Denver ka hor inta uusan u wareegin Springs. (Khadka telefoonka ee shabakadda gobolka oo dhan waa 844 / 864-8341.)
Isbahaysiga cusub ee 'Colorado Springs Sanctuary Coalition' ayaa si toos ah loo qabtay markii uu codsigu yimid, maxaa yeelay aaggii ay ku noolaayeen qolalka hoose oo dhan waxaa wax yeeleeyey daadad horraantii xagaagan. "Laakiin markii aan maqlay xubnaha muhaajiriinta ah ee isbahaysigayaga oo leh, waad ogtahay, 'Waxaan ku noolaan lahayn qol haddii ay macnaheedu tahay inaan qoysaskeenna wada joogno,' go'aanka ayaa runtii ahaa mid aad u fudud," ayuu yiri Rev. Nori Rost oo ka tirsan dhammaan dadka oo dhan. “Ma hagaagsan tahay? Maya. Laakiin [Elmer] ma sii joogi doonaa dalkan? Haa. ”
Waqtigaan la joogo, Rost waxay xafiiskeeda u badashay qol jiifka aabaha iyo wiilka. (David, muwaadin, halkan ayuu joogaa maadaama hooyadiis ay waqti buuxa ka shaqeyneyso Aurora iyadoo daryeeleysa walaalihiis, sidoo kale muwaadiniinta, qoyskuna ma awoodi karaan xanaano maalmeedka.) Hawlaha kaniisaddu way sii socon doonaan sidii caadiga ahayd “Aad ayaan u qaddariyaa in dad aanan waligey aqoon ay rabaan inay caawiyaan,” ayuu yidhi Peña, markii David uu ku booday sariirta gadaashiisa. Weli, waa wax laga xumaado. “Dad aad u tiro badan ayaa lagu soo dhoweeyay dalkan; waa Mareykanka ay ku midoobeen soo galootiga. Marka, maxaad hadda noo daba socotaa markaan rabno fursad isku mid ah qoysaskeenna? ”
Isbahaysiga macbudka ayaa aruurin doona tabarucaadka iyo lacag uruurinta magaca Peñas. Candace Datz, qabanqaabiyaha isbahaysiga iyo wasiirka dhalinyarada ee Kaniisada First Congregational, ayaa sheegay inay u baahan doonaan mutadawiciin, dhar, musqulo iyo cunto aan halaabin, iyo lacag lagu hagaajinayo sagxadda hoose. Ka hubi macluumaad dheeri ah bogga Isku-xidhka Sanctuary ee Colorado Springs.
Hadda oo ay dhammaan Naftu ku jirto, ayuu Datz sheegay in baahida ugu weyn ay tahay kaniisado cusub oo barakaysan oo ku yaal aagga. "Waxaa jiray codsiyo dheeri ah [oo ah gabbaad] tan iyo markii aan aqbalnay inaan qaadanno Elmer," ayuu yiri Datz. Aad ayey u adag tahay in la dhaho, 'Maya, raali ahow, ma hayno meel aan ku dhigno.'
Taasi waa sababta SH, xubin muhaajir ah oo ka tirsan isbahaysiga oo aan rabin
magaceeda la isticmaalay, waxay dareemeysaa dareen deg deg ah oo soo cusboonaaday. “Waxaa jira qoysas badan oo kale oo qatar ugu jira inay kala tagaan separated sababo la xiriira waalidku inuu ku xadgudbay taraafikada,” ayay u qortay Indy.
Waxaan u baahanahay kaniisado badan si aan u qaadno ballanqaadkan oo aan u noqonno kaniisad barakaysan [sidaa darteed] qoysaskaas waxay fursad u helayaan inay ku midoobaan. ”